किन टोक्छ सर्पले, कसरि बच्ने र टोकी हालेमा के गर्ने ? - ज्ञानविज्ञान
किन टोक्छ सर्पले, कसरि बच्ने र टोकी हालेमा के गर्ने ?
किन टोक्छ सर्पले ?
जाडो समयमा सर्पहरू कुनै न्यानो ठाउँमा हलचल नगरी केही नखाई बसिरहन्छन् जसलाई बैज्ञानिक भाषमा हाइवरनेसन भनिन्छ । तर गर्मीयाममा सर्पहरू बाहिर निस्कन्छन् । प्रायजसो सा“झ परेपछि सर्पहरू आहार (मुसा, भ्यागुतो, किरा फट्यांग्रा) को खोजीमा खेतबारी, बच्चा खेल्ने ठाउँ तथा मानिसको घरसमेतमा आउने गर्छन् ।
मुख्यतः करेँत सर्प मानिसको घरमा समेत पस्छन् । सर्पको आहारा मानिसको बालीनालीलाई बिगार्ने मुसा र किराफट्यांग्रा हुने भएकाले धेरैले यसलाई राम्रो मान्छन् र मार्दैनन् पनि । सर्पको आहार मानिस होईनन् । बरू मानिसदेखि सर्प डराउछन् ।
त्यसैले सर्पले मानिसलाई हत्तपत्त टोक्दैन । यदि कसैले जान अन्जानमा सर्पलाई चलाएमा प्रत्याक्रमणस्वरुप वा आफ्नो बचाउका लागि सर्पले टोक्ने गर्छ । घरभित्र पसेको करेँत सर्पलाई निदाएको व्यक्तिले हातखुट्टा चलाउँदा वा घच्चा लागेमा सर्पले आफ्नो बचाउस्वरूप निदाएको मानिसलाई टोकिदिन्छ ।
कसरी छुट्याउने बिषालु सर्प
हुन त सर्पलाई हेरेर विषालु वा विष नलाग्ने भनेर छुट्याउन गाह्रो हुन्छ । विषालु सर्पको मुखमा दुईवटा फ्याक (भाँचिएको भए एउटा, त्यो पनि नहुन सक्छ) तथा कत्ला पेटको एक छेऊदेखि अर्को छेऊसम्म हुन्छ । टाउकोको कत्ला सानो तर धेरै हुन्छ । तर सर्प हेरेरै भने ढुक्क हुनुहुदैन । विषालु सर्पको विष तीन प्रकारको हुन्छ ।
१. हिमोटक्सिन (रगतमा असर गर्ने )
२. न्यूरोटक्सिन (स्नायू तन्तुमा असर गर्ने)
३. मायोटक्सिन (मांसपेशीमा असर गर्ने ) ।
यिनै विषको आधारमा बिरामीमा लक्षण देखिन्छ ।
सर्पको टोकाईबाट कसरी बच्ने
सर्पको टोकाईपछि उपचार गर्नुभन्दा सर्पको टोकाईबाट बच्नु नै उत्तम हो । यस्ता व्यवहारिक उपाय अपनाएर सर्पको टोकाईबाट बच्न सकिन्छ ।
१. सर्प प्राय राती निस्कने गर्छ । त्यसकारण प्रकाश दिने वस्तु टर्च, लाल्टीन आदि बोकेर मात्र तथा खुट्टामा जुत्ता र शरीर ढाक्ने कपडा लगाएर मात्र बाहिर हिडडुल गर्नुपर्छ ।
२. घर वरपर वा बच्चाहरूले खेल्ने ठाउँमा झार, जंगल वा झ्यास भए हटाउने वा जमिनमा रहेका दुलाहरू पुर्नुपर्छ ।
३. सर्प बस्ने ठाउँहरू जस्तै परालको थुप्रो, दाउराको चाङ ढुंगा वा ईटाको थुप्रो कुनाकाप्चा वा प्वालमा चलाउनुपरेमा पहिला लामो लठ्ठीले चलाएरमात्र हातले चलाउनु पर्छ । त्यस्ता सर्प बस्ने ठाउँहरु घर वरपर कदापि हुनुहुन्न ।
४. सर्पलाई जिस्क्याउनु वा चलाउँनु हुँदैन, कतिपय सर्प निकै नै रिसाहा हुन्छन् र सामान्य रूपमा चलाए पनि टोकिहाल्छ ।
५. सर्पले मरेको जस्तो स्वाङ पार्न सक्छ, त्यसैले सर्पलाई मरेको अवस्थामा पनि हातले चलाउनुहुँदैन । बरू अलि लामो लठ्ठीले चलाएर मरे–नमरेको यकिन गर्नुपर्छ ।
६. साना–साना नानीले खेल्दा सर्प बस्न सक्ने ठाउँलाई हातले चलाउने, दुलोमा हात घुसार्नेजस्ता काम गर्न सक्छन् र सर्पले टोकी सकेपछि डरका कारण अभिभावकलाई नबताउने हुनसक्छन् । त्यसकारण सर्पका बारेमा केटाकेटीलाई पूर्ण जानकारी गराउनुपर्छ र टोकी हालेमा तुरुन्त खबर गर्नु भनी सिकाउनु पर्छ । यसका साथै अभिभावकले आफ्नो बच्चामाथि विषेश निगरानी राख्नु पर्छ ।
७. राती सुत्दा झूलको प्रयोग गर्नु पर्छ ।
८. सर्पको बढी प्रकोप भएको ठाउमा सकभर एक्लै हिड्नु हुँदैन ।
९. ताल—तलाऊ, नदी—नालामा पनि विषालु सर्प हुने भएकाले विशेष सावधानी अपनाउनु पर्छ । सर्पले टोकेमा देखिने संकेत टोक्ने सम्पूर्ण सर्प विषालु हुँदैनन् । ८० प्रतिशत सर्पहरूको टोकाई विष नलाग्ने खालको हुने गरेको एक तथ्यांकले देखाएको छ । तर सर्पले टोकेमा मान्छे आत्तिने गर्छन् । यसले उनीहरूमा तनाव सृजना भई हृदयाघात हुन्छ र त्यसैकारणले पनि मृत्यु हुने गरेको छ ।
सामान्यतया सर्पले टोकेको ठाउँमा यस्ता लक्षण देखिन्छन्
१. दुईवटा फ्याक (डसेको चिन्ह) हुन्छ ।
४. रगत बग्न सक्छ
५. फोका आउन सक्छ
६. टोकेको क्षेत्रका लिम्फनोड बढ्न सक्छ ।
७. ढिलो भएमा पाक्ने, संक्रमित हुने र तन्तुहरू मरेर जाने हुनसक्छ ।
टोकेको भागभन्दा शरीरका अन्य भागमा देखिने लक्षण
चक्कर लाग्ने तथा बान्ता आउने
सम्पूर्ण शरीर दुख्ने
तनाव सृजना हुने
रक्तचाप कम हुने
नडीको चाल बढ्ने
ढिलो देखिने लक्षण
बिरामी शकमा गई बेहोस हुनसक्ने
फोक्सो सुनिन गई श्वास फेर्न गाह्रो हुन्छ ।रगतमा असर पार्ने विष लागेमा अत्याधिक रक्तश्राव हुने तथा नाक, कान, आ“खा, गिजा, मुख, पिसाबमार्ग तथा योनिमार्गबाट समेत रक्तश्राव भई बिरामीमा पानीको मात्रा कम हुने र बेहोससमेत हुने गर्छ ।
सर्पले टोकी हालेमा के गर्ने
सबै सर्प विषालु हुदैनन् र टोक्नासाथ व्यक्तिको मृत्यु पनि हुदैन । तुरुन्त मृत्यु भएमा बिरामी डराएर मुटुघात भई मृत्यु भएको बुझ्नु पर्दछ । विष सर्न केही समय लाग्ने भएकाले विषकै कारणचाहिँ अलि समय पछि मृत्यु हुने गर्दछ । सर्पले टोकी हालेमा बिरामीले यस्ता उपाय अपनाउनुपर्छ
१. तनाव कम गर्न बिरामीलाई सान्त्वना दिने
२. टोकेको ठाउको तल्लो जोर्नीदेखि माथिल्लो जोर्नीसम्मको भागमा २ औंला छिर्ने गरी खुकुलो व्यान्डेज वा १० सेन्टिमिटर चौडा कपडाले बेर्ने (प्रेसर व्यान्डेज)
३. टोकेको भागलाई हल्लिन नदिन स्प्लिन्ट (काम्रो) को प्रयोग गर्ने र सक्दोचा“डो बिरामीलाई अस्पताल वा सर्पदंश केन्द्रमा पुर्याउने ।
४. सर्प मरेको भए पहिचानका निमित्त अस्पताल लैजाने, तर हरेक सर्पलाई चिकित्सकले चिनेकै हुनुपर्छ भन्ने हुन्न
५. उपचार नहुन्जेलसम्म बिरामीलाई पानीसमेत नखुवाउने
सर्पले टोकेमा के गर्नु हुदैन
हाम्रो समाजमा अन्धविश्वास व्याप्त भएकाले सर्पले टोकेमा यस्ता कार्य गर्नुहुँदैन
१. सर्प मार्ने प्रयास नगर्ने बरू विरामीलाई प्राथमिक उपचार दिने र सक्दो चाँडो अस्पताल पुर्याउने
२. टोकेको ठाउलाई नचलाउने, चलाएमा शरीरमा विष चाँडै पस्न सक्छ
३. बिरामीलाई सन्चो नभएसम्म वा अस्पतालमा उपचार नगर्दासम्म प्रेसर व्यान्डेज नहटाउने ।
४. ब्यान्डेज धेरै कसेर बाँध्नुहुदैन तथा डोरीले टोकेको भागभन्दा माथि बाँध्नु हुदैन यसो गरेमा रक्त सञ्चार रोकिन गई त्यस भागका तन्तु मर्न सक्छन् र ती भाग/अंग नै नष्ट हुन सक्छन् ।
५. धामीझाँक्री, तन्त्रमन्त्र तथा झारपातको प्रयोग गरेर बिष लागेको वा नलागेको छुट्याउन सकिंदैन । बरू बिरामीको ज्यान जान सक्छ तसर्थ सक्दो चाँडो बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउनुपर्छ ।
७. पुराना विधि जस्तै धारिलो हतियारले चिर्ने, अंग नै काट्ने, डढाउने गर्नुहुँदैन यसो गर्नाले अत्यधिक रक्तश्राव भई मृत्युसमेत हुन सक्छ ।
८. टोकेको ठाउमा रसायनको प्रयोग पनि गर्नु हुदैन ।
९. मुखले चुस्ने वा सक्सनले विष तान्ने जस्ता कार्य पनि गर्नुहुँदैन ।
हाम्रो समाजमा व्याप्त केही अन्धविश्वास
हाम्रो समाजमा केही अन्धविश्वासहरू अझै पनि व्याप्त छन । आधारहीन यस्ता अन्धविश्वासका कारण सर्पको टोकाईबाट कयौंको ज्यानसमेत जाने गरेको छ । हाम्रो समाजमा यस्ता केही अन्धविश्वास अझैं पनि व्याप्त छन् ।
१. खुर्सानी खाएर सर्पले टोके–नटोकेको थाहा हुन्छ ।
२. धामीझाँक्रीले फूकेको भरमा सर्पको विष हराएर जान्छ ।
३ कुखुराको मल टोकेको भागमा लगाउँदा विष हराएर जान्छ ।
४. टोकेको भागभन्दा माथि कसेर बाँधेमा सर्पको विष माथि सर्दैन ।
Don't Miss it जिम गर्दै हुनुहुन्छ ? ख्याल गर्नुस् यी कुराहरु
Up Next मह खाँदाको आश्चर्यजनक फाइदाहरु जानिराखाैँ
3 weeks ago mygyanbigyan
दूधमा तुलसीको पात उमालेर पिउँदाको फाइदा, जानिराखाै
अहिले मौसम परिवर्तनको समय छ । प्राय धेरै मानिसलाई रुघा लाग्‍ने र ज्वरो आउने गरेको हुन्छ । तर हामी मेडिकलबाट…
जस्तोसुकै जोर्नी दुखाईलाई पुर्णरुपमा निको पार्ने यो अचुक घरेलु औषधी, जानीराखौँ !
जोर्नी दुखाई एक साझा र पीडादायी समस्या हो । जोर्नी दुखाई हातगोडाको जोर्नी मात्र नभई शरीरको जहाँ-जहाँ दुई हड्डी जोडिएको…
घरेलु उपचार, भिडियो
के तपाइकाे हातकाे छाला जाने समस्या छ ? छ भने यी घरेलु उपाय अपनाउनुहाेस्
प्राय मौसम परिवर्तनका समयमा मानिसमा स्किन पिलिंग अर्थात छाला जाने समस्या हुने गर्दछ। समयमै यसको ध्यान नराख्दा यसले भयानक रुप…
घरेलु उपचार बाट यति धेरै राेगहरूकाे छुटकारा जानेर चकित पर्नु हुनेछ
अधिकांशले स्वास्थ्यलाई भन्दा खानपानलाई ध्यान दिने चलन छ । यस्तो खानपानले समस्या बनाएमा गाउँघरमा भनेको वेलामा स्वास्थ्यकर्मी पाउन पनि समस्या…
हामीले कुन समयमा कति खाना खाने ? यसरी मिलाएर खाएमा न रोग लाग्छ न भोक !
प्राय मानिसले पटक पटक खाना खाएपनि छिनछिनमा भोक लागिरहेको ह्न्छ । हामिले पेटको भोक निको पार्नलाई हलुका भोजन खानु पर्ने…
10 months ago biplov
के तपाई सागसब्जीको बोक्रा छोडाएर खाने गर्नुहुन्छ ? थाहापाउनुहोस् सागसब्जीको बोक्रा छोडाएर खाने कि नछोडाइ खाने ?
सकेसम्म धेरै फलफूल र सागसब्जी खानु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक भएकोमा कुनै शंका छैन । तर हामीले खाने यस्ता फलफूल र…
7 months ago Pradeep Karki
बिहान ढिलाेसम्म सुत्ने बानी छ भने तुरून्त हटाउनुहाेस्, नत्र यस्ता समस्या आउन सक्छन्
सुतिराख्न कसलाई मन पर्दैन र ? सुत्दा दिमाग तिखो हुन्छ भने शरिरमा दिनभरी काम गर्नका लागि ऊर्जावान् राख्छ । यतिमात्र…
यस्ता छन् तेजपत्ताका लाभदायक गुण, जान्नुहाेस्
बिशेष गरी गरम मसलाका रुपमा प्रयोग हुने तेजपत्ता एक प्रकारको बासनादार पात हो । बिभिन्न परिकारहरुलाई स्वादिलो र मिठो बनाउन…
हिजाेलाइ बिर्सेर आजलाइ कसरी शुन्दर बनाउने ? जान्नुहाेस
तपाइकाे आज एउटा नयाँ सुरूवात हाे । न त हिजाे थियाे, न त भाेलि नै हुनेछ । प्रत्येक आज एउटा…
घरमै छन्, कपाल सेतो हुनबाट जोगाउने उपायहरु
कलिलो उमेरमै कपाल फुल्ने समस्याबाट धेरै मानिस हैरान भएका हुन्छन् । फुलेको कपालले गर्दा सौन्दर्यमा ह्रास आउने तथा व्यक्तित्वमा असर…
व्यवसायिक बेल खेति गर्ने हो कि ? स्वास्थ्यमा पनि यस्ता छन् फाइदाहरु
बेल (Wood Apple, Limonia acidissima) नेपालमा परापुर्व कालदेखि नै खाँदै आएको एक फल हो । बेललाई सस्कृतमा श्री फल भनिन्छ…
5 months ago mygyanbigyan
स्मार्ट कसरी बन्ने ?
‘स्मार्ट’ हुनु सबैको सबैको चाहना हुन्छ । बाहिरि आवरणले नभई भित्र ज्ञान र व्यवहारले ‘स्मार्ट’ हुनु जरुरि छ । त्यसैले…
चिसो पानीले नुहाउँदा हुन्छन् यस्ता फाइदा, जान्नुहाेस्
गर्मी मौसममा प्राय सबै मानिसलाई चिसो पानीले नुहाउन मन पर्छ । यसले शरीरलाई शीतलता प्रदान गर्नुका साथै शरीर सफा राख्नमा…
व्यक्तित्व विकास (14)
सामान्य ज्ञान (21)